2017 ga-afọ nke laptọọpụ na Windows 10 na Snapdragon ibe | Akụkọ akụrụngwa
Afọ ndị gara aga anyị agaghịdị eche n'echiche na ama ma ọ bụ mbadamba nwere ike inwe mgbawa ma ọ bụ SoC nwere ike ịnagide Pentium ndị ahụ n'oge gara aga ma ọ bụ ọbụlagodi ndị nhazi ọzọ. Nke a bụ ọganihu nke teknụzụ mkpanaka na ụfọdụ nnukwu aha na mgbawa mgbawa na-atụgharị na PC desktọọpụ.
Nke a bụ Qualcomm nke ruru nkwekọrịta na Microsoft iji gosipụta n'afọ ọzọ Laptọọpụ ndị ga-enwe afọ ha ibe nke onye nrụpụta ahụ dị mkpa nke nwere gam akporo dị ka mgbidi kachasị. N'ihi ọganihu nke nkà na ụzụ, ọ bụ ihe nkịtị na Qualcomm emesị mee ka laptọọpụ.
Na bụ na Tọzdee gara aga Microsoft mere mmemme akpọrọ Windows Hardware Engineering Engineering Community (WinHEC) na ya Qualcomm gosipụtara ọdịdị dị egwu ma na-eju anya. Companieslọ ọrụ abụọ ahụ kwupụtara na ha ga-emekọrịta iji weta ahụmịhe Windows 10 zuru ezu na nhazi processor Qualcomm, na-amalite site na Snapdragon na-abịa.
Nke a dị ezigbo mkpa maka ọtụtụ ebumnuche, mana ọ bụ n'ihi na ndị na-arụ ọrụ Qualcomm dabere na ihe owuwu ụlọ nke ejirila na desktọọpụ PC yana nkesa Linux. Ọhụrụ Snapdragon mgbawa ga-abụ SoC mbụ nke ụdị ya na-agba ọsọ sistemụ 64-bit.
Microsoft na Qualcomm kwupụtara na laptọọpụ nwere Snadpragon ga-abụ maka afọ na-abịa. Ngwaọrụ ndị a nwere ike ịgba ọsọ Windows 10 na mmemme ya dị oke egwu na-enweghị nnukwu nsogbu, mana yana iji ịnye slimmer imewe na ndụ batrị ogologo.
E gosipụtara ngosi ya n'onwe ya, nke Microsoft gosipụtara PC na Snapdragon na na-eme Adobe Photoshop ọrụ, otu n’ime mmemme ndị a ma ama maka iji oke akụ na ụba eme ihe na kọmputa. Anyị nwere ike ịsị na Snapdragon chip nwere 835 gafere na ezigbo ederede nke kachasị ya nwere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Na 2017 anyị ga-ahụ laptọọpụ nwere Windows 10 na Qualcomm's Snapdragon chip
I no na akwa mmiri? Ihe nkiri iji lelee dị ka ezinụlọ site na Netflix